Actorylọ ọrụ Golf Clubs ọkachamara nwere, Nlekọta Golf Clubs N'ogbe, Ọrụ Golf Goobs Ndị Ahịa | Jasde
Osisi golf osisi
Ọkwọ ụgbọ ala Golf
OEM / ODM Ọrụ maka isi golf, golf golf golf ngwugwu set
20 + Afọ GOLF Nrụpụta
OEM Ọrụ maka Golf Set, Golf Head na ihe ndị ọzọ Golf
Dịka ọkachamara ụlọ ọrụ gọọlfụ gọọlfụ nwere afọ iri abụọ na atọ, Jasde na-enye klọb golf na-ere ahịa na usoro golf na-akwụ ụgwọ na ọnụahịa ụlọ ọrụ asọmpi. Jasde dị ebe a iji weta klọb golf kacha mma, nke gosipụtara ọrụ dị mfe, ogo dị elu, mma dị egwu.
Mmadụ Bịa ka ịlele ngwaahịa na n'okpuru wee nweta nkọwa gbasara ngwaahịa Jasde golf club.
Igodo CNC Golf Golf Crab Club na-agbaghara ndị Japel na-agbaghara ndị Japan na-agbaghara ndị Japanese na-agbaghara ngwá ahịa na-eme mkpọtụ., LTD.
Asọmpi:Ryder ikoEbe Si Malite:Fujian, ChinaAha akara:OaNọmba nlereanya:SP-65002Club ụdị:TictoAkụrụngwa akụrụngwa:StiilFlex:NkeNwoke:NwokeDEXTER:Aka nriAgba:OjiLogo:Nabata akara obodoAha Ahịa:Golf Pratter ClubCombo set nyere:3A na-eme ka CNC Milled Golf Club Club na-agbaghara ndị Japanese na-agbaghara egwu na-agbaghara ngwá ọrụ ndị Japanese na-agbaghara ngwa ngwa-Xamen jasde egwuregwu comm -, 100% okike na-emepụta ihe ọhụrụ.
Gold Golf Consful Pụrụ Iche Igwe Ọgwụ Mill Roll Golf Golf Golfsal Weghara Ndị Na - emepụta CNC Plent-Jasde
Asọmpi:Ryder ikoEbe Si Malite:Fujian, ChinaAha akara:OaNọmba nlereanya:SP-65009Club ụdị:TictoAkụrụngwa akụrụngwa:StiilFlex:NkeNwoke:NwokeDEXTER:Aka nriAgba:A chọrọ ka a chọrọIhe:1020 carbon steelLOD:3.5Arta ọrụ:AwoMooq:100PCÀgwà:oke njedebeỌdịda:Aka nriIbu ibu:Phiter 350gJasde China na-ekenye iche na-emebi emebi na Clus Roll Golf Golf na-agbaghara CNC Plent ndị na-emepụta ihe - jasde, 6500 square mita
Ọkachamara OEM New OEM Golf Golf Prainter Club na-agbanwe agbanwe na Contaving Logo Satin Golf Platter na ndị na-emepụta igwe CNC
Jasde ọkachamara na-eme ka ọ dị elu na-eme ka ihe dị ka ihe dị mkpa na-acha uhie uhie na-agbanwe agbanwe.
Nnukwu Jasde Golf Cololes Golf Club Plub Plub Plub Club Plub Pinter na-enweghị isi na-enweghị igwe anaghị agba nchara mpịakọta nri
Ebe Si Malite:ChainaAha akara:Jasde ma ọ bụ omenalaNọmba nlereanya:Gp-ml01Ihe:Igwe anaghị agba ncharaDEXTER:Aka nriAgba:Nwa, ọla edo, acha anụnụ anụnụ, rosegall na ndị ọzọClub ụdị:Golf na-etinye isiLogo:Log logỤdị:Kpochapụwo malletIbu ibu:375gMooq:200pcsIhu:Cnc mildMillking:Akụkụ CNC mildUsoro:Ma ọ bụ oxidizedJasde Golf Cololes Golf Club Cologinal Club Plub Club Plub Club Plub Club Plat Hedfand Golf Parged Golfprice-Jasde
Anyị abụghị naanị ụlọ ọrụ gọọlfụ etinyere ụlọ ọgbakọ gọọlfụ dị iche iche, usoro gọọlfụ omenaala, anyị bụkwa ezigbo onye ọchụnta ego, na Jasde ị nwere nhọrọ nke ịzụ ngwaahịa gọọlfụ ma nye gị ọrụ ị na-agaghị enweta ebe ọ bụla ọzọ.
Nke ahụ bụ-Anyị na-enye ọ bụghị naanị GOLF, kamakwa ỌRER!
1. Omenala elu arụmọrụ titanium ọkwọ ụgbọala
2. Mpi ego na esorowo osisi na wedges
3. Ike R
& D ikike
4. Ngwaọrụ dị elu
Anyị nwere ike inye ngwaahịa dị elu dịka ihe dị iche iche ndị ahịa chọrọ. Jasde ọkachamara ọrụ otu bụ ebe a iji nweta ihe ị chọrọ na golf klọb na akụ na bolts. Nnọọ ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọrụ Jasde.
Intro na ngwakọ ngwakọ plge-jasde Golf Club
Anyị na-enye ndị ahịa OEM, ODM na-enye ndị ahịa nọ na ụwa niile site na Golf zuru ezu, ndị ọkwọ ụgbọ ala, ahịhịa, pọpu, chippers na ndị ọzọ.Intro na ngwakọ plged pọfge-jasde golfans cols
Na JASDE, ị nwere nhọrọ nke ịzụrụ ngwaahịa ma nye gị ọrụ ị na-enweghị ike ịnweta ebe ọ bụla.
Xiamen Jasde Sports bụ ụlọ ọrụ gọọlfụ ọkachamara ọkachamara nwere ihe karịrị afọ 20years na isi gọọlfụ, klọb gọọlfụ, ngwugwu golf na-esite n'ichepụta ma na-eweta ụdị ngwa golf niile. Companylọ ọrụ anyị nọ na Xiamen, South nke China. Anyị na-enye OEM, ODM ọrụ yana ngwaahịa anyị (Koala, Mazel) maka ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile. Golf ọkwọ ụgbọala, n'ọhịa, ígwè, putters, wedges, chippers niile nwere ike ahaziri.